Osisi ime ụlọ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ime ụlọ
Kedu esi amanye Shefler ka ohia?
Kedu esi amanye Shefler ka ohia? Aga m agwa gị na ị bụghị Intanet! Ọ dị mkpa ka ịkwaa mmiri gị ọkụ ozugbo, gbanye 1 otu ugboro n'ụbọchị, yabụ kwa ụbọchị, obere mmiri, kwesịrị iguzo ...
Atụmatụ nlekọta Chestnut
Atụmatụ maka nlekọta ime ụlọ chestnut M nwere ụdị chestnut ahụ, m ga-agwa gị n'ezoghị aka na Ịntanetị, ọ na-eto nke ọma, na-amasị ịgbara n'oge okpomọkụ, ebula mkpụrụ, n'oge oyi, ọ na-adaba ụfọdụ n'ime epupụta n'ime ...
Kedu ala dị mkpa maka Kalanchoe?
Kedu ala dị mkpa maka Kalanchoe? Ala maka Kalanchoe na-anọpụ iche ma ọ bụ dịtụ acidic (pH 5,5-6,5). Osisi na-eto nke ọma na ngwakọta ndị na-eri nri. A na-transplanted ndị na-eto eto n'ime ngwakọta nke akụkụ 4 ...
Kedu ihe bụ nlekọta kwesịrị ekwesị maka Muraya. Gini mere okooko osisi na-adighi adighi adapu na obere 2 oge obere obere Murai?
Kedu ihe bụ nlekọta kwesịrị ekwesị maka Muraya. Gini mere okooko osisi na-adighi adighi adapu na obere 2 oge obere obere Murai? Enwetara m mmiri na buds na mmiri. Nakwa ebe na 10, lee. Iwu nke ndị na-akụ akwụkwọ osisi na-edoghị anya - ka oge ntoju ...
Esi esi mee ka orchids mmiri?
Esi esi mee ka orchids mmiri? A gwara m na ọ dị mkpa ịbịnye mmiri na pallet mgbe niile ma jide n'aka na ọ bụ n'ebe ahụ n'oge niile, nke m na-eme. Nke a bụ ihe ị ga-eme orchid ọzọ ...
Biko gwa m ma ọ ga-ekwe omume iji oriọna ultraviolet maka osisi ụlọ?
Biko gwa m ma ọ ga-ekwe omume iji oriọna ultraviolet maka osisi ụlọ? ekele m, banyere ULF, na ma ọ ga-ekwe omume iji oriọna DNAT maka ọkụ ọkụkụ ọzọ, dị ka tomato, ose, eggplants. Iji UV ...
Esi na-eri nri phalaenopsis blooming?
Olee otú e si eri nri a okooko phalaenopsis? Phalaenopsis - akwụkwọ osisi na - enweghị atụ, orchids na - eto mgbe niile; ụdị ha na adọ ụdị ha na-acha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'afọ niile dị mma maka ndị mbido. Site na nlekọta kwesịrị ekwesị, phalaenopsis blooms rụrụ ọrụ, ogologo oge…
Gwa m ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na nkwụ epupụta akọrọ ntụziaka ?? Enwere fatịlaịza pụrụ iche?
Gwa m ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na nkwụ epupụta akọrọ ntụziaka ?? Enwere fatịlaịza pụrụ iche? Amaghị m banyere ịgbara mmiri, ma dị ka akwụkwọ nke anọ nke nkwụ na-egosi, onye mbụ ahụ malitere ịkụ. Nwere ...
Kedu ka esi esi weghasị osisi? Ntuziaka zuru ezu ga-amasị m maka onye mbido.
Kedu ka esi esi weghasị osisi? Ntuziaka zuru ezu ga-amasị m maka onye mbido. Ịhọrọ ite. Ị ga-ahọrọ nha na ọdịdị nke ite ahụ, dabere na mmepe usoro mgbọrọgwụ nke ụdị cactus na ị ga-aga ...
Kedu ihe dị ize ndụ dieffenbachia? Gịnị mere o ji kwuo na ọ bụ nsi?
Kedu ihe dị ize ndụ dieffenbachia? Gịnị mere o ji kwuo na ọ bụ nsi? banyere uwe-dị jụụ! Ma a respirator! Na akwụkwọ ọkọwa okwu! Agụrụ m na ọ na-akpata nwoke na-enweghị ike, ọ dịkwa oke egwu maka nwamba. My pusi ...
Okooko osisi na nkata ka a ga-agba mmiri?
Okooko osisi na nkata ka a ga-agba mmiri? Ee, n'aka, okooko osisi na-aṅụkwa mmiri. ma ọ dị mkpa ka a kwadoo ya. Jide n'aka mmiri! Tatiana, ezigbo mgbede! Ogbo ogbo ahihia a kwesiri ibu ihe kpuchie ya na miri !!
A na-agbazi akwụkwọ na ficus
Ficus doo curl Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ ọtụtụ. Iji wepu ọrịa, ị kwesịrị iji nlezianya nyochaa mkpịsị agbagwoju anya maka ntụpọ na ihe ụfọdụ. Ọ bụrụ na ha bụ, mgbe ahụ ọ ga-abụkarị ficus gị ...
na cactus green di otú a…. eji mkpachapu Cacti bu nkpuru mara nma nke nkpuru ahihia zuru oke kpuchie akpukpo ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ cacti niile enweghị akwụkwọ nkịtị, ọtụtụ nwere ogwu. Ha bụ ...
Kedu oge na-eto eto na osisi?
Kedu oge na-eto eto na osisi? Oge nke mmepe, uto na-arụsi ọrụ ike. Ajụjụ a adịlarị ebe a http://otvet.mail.ru/question/17180703 Oge nchịkọta (site na Lat.) Ọganihu Vegetatio, na-epulite) oge nke afọ nke mmepe na mmepe ga-ekwe omume ...
Enwere ike idutu osisi ego? Nnukwu arọ alaka ... leaning ala ... na-agbasa ...
O ga - ekwe omume iwe osisi ego? Alaka ndi di ukwu ... gbada n’ala… ma gbarie… Siri ike! Aka m adịghị akwụ ọtọ ụdị ntutu a na-egbu egbu. N'ezie ị nwere ike. Bee ya ka ichoro, o si na…
Kedu mgbe ị ga-achọ ịkwado nwa nwa nwa Krassula?
Kedu mgbe ị ga-achọ ịkwado nwa nwa nwa Krassula? M na-atụgharị mgbe obere obere epupụta pụta. Emere m ụkpụrụ m. N'ozuzu, anyị nwere ya na-eto eto n'enweghị pinching ... Na ihe a ...
Gịnị mere epupụta na-acha odo odo? Kedu nlekọta a chọrọ maka osisi a?
Gịnị mere epupụta na-acha odo odo? Kedu nlekọta a chọrọ maka osisi a? Akwụkwọ na-acha odo odo ma daa. Osisi ala nke osisi toro eto na-agbanye edo edo na oge wee daa. Kedu mgbe ...
Kedu oriọna kachasị mma maka mkpụrụ osisi na-eto eto?
Kedu oriọna kachasị mma maka mkpụrụ osisi na-eto eto? Iji mee ka ikpo ọkụ bulbs n'ozuzu ha, ha anaghị adabara luminescence, ha na-eri naanị 3% nke ọkụ ọkụ eletrik na ndị ọzọ bụ okpomọkụ radiation. Ụdị ọkwa ọ na-anabata nke oriọna ...
Kedụ ụdị osisi "AKORKỌ MALỌ."
Kinddị ụdị osisi "MORNING GLORY" Ipomoea (Ipomoea Violacea); - ezinụlọ: Convolvulaceae; - aha otutu: Ipomoea; - nlele: violacea (Morning otuto) - sitere: ugwu nke South Mexico, Guatemala, West Indies, na ebe okpomọkụ nke South ...
Kedu ala kacha mma maka osisi ndị dị n'ime ụlọ?
Kedu ala kacha mma maka osisi ndị dị n'ime ụlọ? Ugbu a, ụlọ ahịa ndị ahụ na-ere ihe dị iche iche nke ala maka osisi dị iche iche. Na-agụ nchịkọta na ngwugwu, a na-egosipụta ihe niile n'ebe ahụ. Maka ulo ime ụlọ gị n'ebe ahụ ...